Flickr Uploadr ayaa badbaadiya maalinta! | Martech Zone
Flickr Uploadr ayaa badbaadiya maalinta!
Axad, Juun 3, 2007 Talaado, Oktoobar 4, 2011 Douglas Karr
Waxaan ahaa isticmaale yar Flickr runtiina wax badan kuma qaban. Sababta ugu weyn ee aan u isticmaalayo Flickr waxay ahayd muuqaalka kooxda ee ii oggolaatay inaan sameeyo I Xullo Kooxda Indy loogu talagalay bogga Waxaan Doortay Indy. Ku biirista kooxuhu waa astaamaha ugu muhiimsan ee bar kasta oo baraha bulshada lagu wada xiriiro dhammaantoodna waxay umuuqdaan kuwa qabanaya oo bixinaya.
My uu ka qalin jabiyay Dugsiga Sare usbuuc ka hor (oo leh ixtiraam 3.81 GPA, oo ah deeq waxbarasho oo yar, oo laga aqbalay barnaamijka Physics ee IUPUI). Waxaan qaatay sacabbo sawiro ah oo ku saabsan qalin jabinta, waanan kiciyey oo waxaan u diray dhamaan ehelkeena. Isla markiiba, waxaan bilaabay inaan dhibaatooyin la kulmo fol dadka qaar ayaa helay faylka mana furi karin, qaarna wuu kharribmay, qaarna weligood ma helin.
Subaxaan waxaan go aansaday in aan sawirada galiyo Flickr oo aan la wadaago qoyskeyga. Xaqiiqdii waan ka baqayey hawsha, in kastoo… upload, edit, upload, edit, upload, edit. Kahor intaanan bilaabin, waxaan booqday Qaybta qalabka ee Flickr si aan u arko waxa laga yaabo inay isbadaleen waxaanan helay Flickr Uploadr:
Waxay u shaqeysay si la yaab leh! Cabashadayda kaliya ayaa ah in aysan soo bandhigin sawirada aaladda oo leh jihada saxda ah (waxaa lagu soo rogay jihada saxda ah, in kastoo) sidaa darteed waqti ayaan iska lumiyay anigoo isku dayaya inaan ogaado waxa socda. Markii sawirrada la soo galiyay, waxaan sameeyay dejin, oo waxaan la wadaagay qoyskeyga iyo asxaabteyda (waxaad emayl ugu diri kartaa illaa 50 asxaab iyo qoys ah hal tallaal)!
Wanaagsan qabow Mahadsanid, Flickr! Waxaan rajeynayaa inaan arko siyaabo badan oo runtii sawiro loogu soo bandhigo mustaqbalka. Waxay ahayd bilo tan iyo markii aan soo galay Flickr mana muuqato inay jiraan qalab dheeri ah oo si dhab ah loogu soo bandhigayo sawiradaada dhinac, feyl fayl, muqaal, iwm.
View Sawirada Qalinjabinta Bill
Top 10-ka ISP-da Khiyaanada Leh Way Kaa Yaabi Karaan
Jun 3, 2007 at 12: 22 PM
Waxaan ku guuleystey inaan u wareejiyo ku dhowaad dhammaan asxaabteyda si aan u isticmaalo Flickr maaddaama qof kasta oo adeegsada uu u arko is-dhexgalka si fudud in loo isticmaalo. Adeegsiga gurigeyga wuxuu ku dul wareegaa Macbookkeyga iyo iPhoto, in kasta oo ay jiraan codsi kala go 'ah oo Flickr ku siinayo bilaash kumana dhex jiro iPhoto. Qiyaastii $ 10 (Waxaan u maleynayaa) waxaan iibsaday 'FlickrExport' oo si toos ah ugu dhex milma iPhoto isla markaana sameeya upload + tagging iyo doddle buuxda.
Si aan u helo inaan isticmaalo wax sida Flickr waa inay ahaataa mid fudud haddii kale ma dhibi doono, maadaama aan horeyba u soo maray dhammaan geeddi-socodka ku xirnaanta kamaraddayda iyo helitaanka inaan sawirada ka wareejiyo
Muujinta ugu weyni waxay ahayd Nokia N95 - toogasho deg deg ah + upload. Qaar badan oo ka mid ah tallaalada ku jira boggeyga ayaa hadda lagu qaaday 5MP waa badan tahay inkasta oo aysan isbarbardhigi karin kamarad sax ah haddana waxay ku filan tahay sawirrada baloogga
Markaa markaa waxaan u nimid Zooomr, sida aan hubo inbadan oo kale dhamaanteen waxaan wada sugeynay inaan aragno sida ay waxani kudhamaanayaan. Waxaan ku guuleystey inaan galo subaxnimadan laakiin waxaan helay sawirro soo dejinaya oo aad u xanuun badan, waxaan jeclaan lahaa inaan iibiyo qaar ka mid ah tallaaladayda wanaagsan, laakiin saamiga xanuunka / raaxaysigu ma fiicna hadda.
Jun 3, 2007 at 12: 30 PM
Waxaan horey uheli jiray Flickr waana hubaa inuu koray dhowrkii sano ee lasoo dhaafay… iyo inaan u maleeyo inay qeyb ka noqoneyso ciyaarta ciyaarta fiidiyoowga hadana waa xal sawir
Saaxiib wanaagsan iyo aniga waxaan ka shaqeyneynaa xalka aaladda WordPress ee sawir-gacmeedka oo qaata midka ugu fiican barnaamijyo sawirro badan oo muuqaal ah, sida Flickr laakiin ka dhigaya sidaas darteed dhammaan sawiradaada, muujintaada, iwm ayaa gebi ahaanba laga xakameynayaa WordPress-kaaga rakibidda. Looma baahna in laga jawaabo waxyaabaha xisbiga 3aad.
Waxaan haynaa caddeyn shaqeyneysa oo fikradaha ah maalmaha soo socdana waxay diyaar u noqon doontaa sii deynta 1.0.
Waan hubi doonaa inaan jidkaaga u diro si aad ugu garaacdo it
Waxaan kuugu hambalyeynayaa Bill si aad uga gudubto Dugsiga Sare oo aad ula socoto iibiyaha 'GPA'.
Hal shay oo ka maqan sawiradaada waa sawirka adiga iyo wiilkaaga… maxaa jira? hehe… Aan aragno aabbaha hanka leh 🙂
Jun 3, 2007 at 1: 26 PM
Waxaan rajeyneynaa inaan arko taas, Sean. Ma rumaysan karo inaad seegtay sawirka weyn ee 'ol ee aniga iyo wiilkayga iyo gabadhayda - halkaas ayey ku jirtaa!
Jun 3, 2007 at 1: 32 PM
Waxay u badan tahay inaan kuheli doono cadeynta fikradayda boggeyga dambe isla maanta sidoo kale email ayaan kuu soo diri doonaa
Cajiib. Sideen ku seegay sawirkaas adiga iyo qoyskaaga? Eeg adiga, dhammaan faan iyo walxo.
Jun 4, 2007 saacadu markay ahayd 7:32 AM
Hambalyo maqal ah Bill iyo adiga sidoo kale.
Ma isku dayday? http://beta.zooomr.com/?
Sidoo kale haddii aad waligaa rabto inaad ka soo dejiso sawirradaada oo dhan flickr, ku xafid tan ->
Waad ku mahadsantahay Doug caawintaada waxkastoo wordpress word Waad iga soo saartay maraq maalintii dhawayd 🙂